Umdlali omusha weChiefs ukulungele ukubhekana nenselelo | isiZulu
Umdlali omusha weChiefs ukulungele ukubhekana nenselelo
Isiqongqwane siqinisekise ukujoyina iChiefs
IChiefs ihamba phambili kwagaqele oweFS Stars
Besingayiguqisa iBucs - OweFS Stars
Johannesburg - Umdlali omusha weKaizer Chiefs, uDaniel Cardoso, ugcwele ukuzethemba ngaphambi kwenselelo yokuzama ukuthola ijezi kubadlali abafana noMorgan Gould, Erick Mathoho kanye noSiyanda Xulu, naye ongumdlali omusha, eqenjini likaSteve Komphela.
Lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala ujoyine amaGlamour Boys esuka kwiFree State Stars ngenkontileka yeminyaka emithathu kanti futhi unethemba lokuthi uzozibonakalisa kuleli qembu.
Funda nalolu daba: OweDowns uzobolekiswa kwiMaritzburg United
“Kumele ngenze isiqiniseko sokuthi ngisebenza ngokuzikhandla ejimini, ngoba angifuni ukudlala kuphela uma kukhona olimele. Ngifuna ukuzibonakalisa eNingizimu Afrika ukuthi nginethalente,” usho kanje kwiSoccer Laduma.
“Njengoba kunabadlali abafana noMorgan Gould, Erick Mathoho noSiyanda Xulu, naye osanda kujoyina iqembu, ngiyazi ukuthi kuzoba nokuncinzisana okunzima, futhi kuzobanzima kumina ukuba ngithole ijezi eqenjini. Kuzomele ngisebenze ngokuzikhandla ngenze isiqiniseko sokuthi uma nginikezwa ithuba, ngilibamba ngazo zombili.”